Nacaybka oo aad ugu kordhey Maraykanka kadib doorashadii Trump - BBC News Somali
Nacaybka oo aad ugu kordhey Maraykanka kadib doorashadii Trump
Image caption Dibadbaxayaal diidan sara u kaca dambiyada nacaybka ayaa dab qabad siiyay muuqaal loo ekeysiiyay kan madaxweyne Donald Trump
Tan iyo intii Donald Trump loo doortey madaxweynaha Maraykanka bishii November ee sannadkii 2016-kii ayaa waxaa cirka isku shareeray dhacdooyinka nacaybka ku saabsan ee lagula kacayo dadka laga tirada badanyahay sida Muslimiinta, madoowga iyo qoowmiyadaha kale ee yaryar.
Sida lagu sheegey cilmi-baaris ay samaysay xarunta dhexdhexaadnimada ee jaamacadda California State University, labbo tirro ayay kor u kaceen dhacdooyinka nacaybka iyo xagjirnimada ku saabsan meelaha magaalooyinka ah laga soo bilaabo sannadkii 2016-kii.
Magaalada New York waxa uu nacaybka kor u kacay 24%, tiradaasi oo ah tii ugu saraysay muddo 10 sanno ah, halka magaalada Chicago uu kor u kacay 20%, Philadelphia waa 50%, halka Washington uu gaaray 62%. Waxa ayn ka midyihiin illaa 25 magaalo oo la darsay.
Dhacdooyinka la diiwaangaliyey waxa ay isugu jiraan weeraro gacan-qaad ah, qoraalo nacayb ah oo darbiyada lagu xardhay, goobaha lagu cibaadeysto oo waxyeelo loo geysto, dadka madoowga ah oo la dhibaateeyo, hanjabaad dadka soogalootiga ah, iyo sidoo kale dadka Islaamka ah oo wax loo dhimo.
Lahaanshaha sawirka Valeria Perasso
Image caption "Darsikeyga waxay ahaan jireen kuwa diiran oo soo dhaweyn badan leh " , ayuu yiri John Gascot, oo ku nool St. Petersburg, Florida.
Iska hor imaad ka dhacay todobaadkii hore magaalada Chalottesville, Virginia ee ka dhashay dadka caddaanka ee isla-qabweyn ayaa waxa ay ahaayeen dhacdooyinkii ugu darnaa ee nacaybka iyo faquuqa ku saabsan ee dhaca inta la ogyahay.
Haweeney ayaa ku dhimatay kadib markii uu qof gaari jiirsiiyey dad si nabadgelyo ah ku banaanbaxayay, kana soo horjeedey caddaanka isla-qabweyn.
Inkasta oo daraasadan soo baxday bishii Maarso ay tahay mid horudhac ah, haddana waxa ay sawir muhiim ah ka bixineysaa sida xaal yahay dalka Maraykanka.
Sida uu qabo Brian Levin oo madax ka ah xarunta cilmi-baaristan samaysay, kadib ololihii madaxweynenimo , iyo arrimo kale oo isbiirsaday ayaa ugu wacan sare u kaca falalka nacaybka ku salaysan.
Lahaanshaha sawirka AFP / GETTY
Image caption Hadallada Trump ayaa la sheegaa inay sabab u yihiin sare u kaca dambiyada nacayebka ku saleysan
Cilmi-baarayaasha qaar ayaa qaba in haddalada nacaybka ku salaysan ee madaxweynaha hadda jooga ay qeyb ka tahay waxyaabaha dhacaya, inkasta oo ay jiraan sababo kale.
"Nacaybka iyo xag-jirnimada waxa ay heleen dareen gaar ah, waxaana lala xiriirin karaa fikradda ah in madaxweyne Donald Trump uu u janjeero dhanka caddaanka xag-jirka ah" ayuu yiri Benjamin Hennig oo ah bare wax ka dhiga jaamacadda Iceland.
Daraasadda oo la sameeyey saddexdii bilood ee ka dambeeyey doorashadii madaxweynaha ayaa waxa ay muujineysaa caddeymo la xiriira saamaynta Trump ee la xiriirta nacaybka sare u kacay.
Tusaale ahaan xarunta Southern Poverty Law Center (SLPC) ayaa qiimeyn ay samaysay waxa ay ku diiwaangalisey 1,094 dhacdo oo nacayb ku salaysan intii u dhaxaysay November 2016-kii iyo February 2017-kii, 37% oo ka mid ah dhacdooyinkaasi waxa ay la xiriireen hal-ku-dhegyada Trump iyo siyaasadihiisa.
Xarunta SLPC ayaa sidoo kale balaarisey dadaalkeeda, waxana ay xariiqdey qariidado kala duwan oo lagu cabbirayo dhacdooyinka nacaybka iyo xagjirnimada.
Image caption Hispanika waxay ka mid yihiin dadka laga tira badan yahay ee ku nool Mareykanka
Inkasta oo aysan jirin illo xogo rasmi ah laga helo, ayaa haddane xogaha laga helo dadka ay dhibaatada gaartay iyo waliba wararka warbaahinta faafiso iyo xogaha kooban ee laga helo ciidamada amniga ayaa lagu saleeyaa xog uruurinta, waxayna muujineysaa in uu jiro sare u kac aad ah Maraykanka oo dhan.
Hay'adda FBI-da oo u xilsaaran in ay la socoto dambiyada nacaybka ku salaysan ayaa waxa xogta ay soo saartay muujineysaa in sannad kasta ay dhacaan illaa 6,000 oo dhacdo, hase yeeshee xarunta Bureau of Justice Statistics ayaa shaacisey xog taasi oo ka duwan oo muujineysa in ay dhaceen 250,000 dhacdo oo nacayb salka ku haya warbixin ay daabacday bishii June.
Image caption Darbigan waxaa lagu xardhay farriimo xambaarsan dulqaad iyo jaceyl ka dib rabshadihii ka dhacay Charlottesville, Virginia
Haddaba halkee ka yimid farqigaasi tirada ah ? qubarada qaarkood ayaa sheegaya in laamaha amniga aysan wadda haysanin tasiilaad ay FBI ugu gudbiyaan xogaha ay hayaan, sidaasi darteedna xogta ay hayaan aysan u talaabin illaa heer qaran.
Sabab kale ayaa ah in dadka dhibbanayaasha 46% aysan u dacwoonin booliiska.
Meelaha qaarkood Maraykanka , xitaa maalmaha axadda oo kale kaniisadaha ayaa albaabada loo xiraa si dadka ku cibaadeysanaya looga illaaliyo weerarada nacaybka ku saabsan.
Xitaa shirkadaha garyaqaanada sida mid ku taala magaalada St. Petersburg oo adeegyo u fidisa dadka soogalootiga ah ayaa la bartilmaameedsaday iyo sidoo kale dukaan rinjiga lagu iibiyo maadaamaa dad badan oo Latinos ah oo dhismaha ka shaqeeya ay wax ka iibsadaan.
Dhacdooyinka loogu hadal haynta badanyahay waa kuwa ka dhanka ah musliimiinta, gaar ahaan warbaahinta, iyo xagga tirakoobyada, waana arrin soo bilaabatay sannadkii 2001-kii markii ay dhaceen weeraradii New York lagu qaaday.
Xogta ay hayso FBI-da ayaa muujineysa 481 dhacdo oo nacayb la xiriira oo muslimiinta laga galay sannadkaasi 2001-da, iyada oo sannadkii ka horeeyey ay tirada ahayd 28 dambi oo kaliya.
Balse intii u dhaxaysay sannadkii 2002-dii illaa 2014-kii falalka loo geysanayo muslimiinta aad ayay hoos ugu dhaceen, hase yeeshee waxa ay soo karaar qaateen sannadkii 2015-kii markii uu bilaabanayay ololaha doorashada Maraykanka. Illaa 67% ayuu sare u kacay nacaybka islaamka lagula kacayo.
Image caption Xirashada Siingesiingaha Waxaa caan ku ah dadka aaminsan diinta Hinduugua
Waxaa jirta diidmo xooggan oo laga qabo tirakoobyada soo baxay ee muujinaya in dhacdooyinka nacaybka ay sare u kaceen intii Trump madaxweynaha noqdey, dadka qaar ayaa ku doodaya in sare u kaca uu biloowdey xitaa ka hor Trump, sababtuna ugu wacantahay dadka soogalootiga ah ee Latinos-ka ah ee tirada kasii batay, iyada oo loo arkay in marka la gaaro sannadka 2040-ka caddaanka Maraykanka ay noqon doonaan dad laga tiro badanyahay.